Ọchịchị British Virgin Islands: A chọrọ azịza ngwa ngwa nye COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » British Virgin Islands (BVI) na -agbasa akụkọ » Ọchịchị British Virgin Islands: Achọrọ nzaghachi na COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • British Virgin Islands (BVI) na -agbasa akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọchịchị British Virgin Islands: Achọrọ nzaghachi na COVID-19
Onye isi Gọvanọ, J. U Jaspert
Nkwupụta na Nzọụkwụ Ndị Ọzọ na Ngabiga
Ezi ụbọchị niile,
Daalụ maka isonyere anyị n'ụtụtụ a. M na-eguzo ebe a na Onye Isi Nlekọta Ndị Isi na Onye Nlekọta Maka Ahụike na-asọpụrụ iji nyefee mmelite na nzaghachi COVID-19 anyị na anyị setịpụrụ usoro ọzọ na nzaghachi anyị.
Nyaahụ, Cabinet zutere iji nyochaa oge anyị Covid-19 usoro na ikpe ọhụụ achọpụtara nke COVID-19 n'ime Territory - nke dị ugbu a na ikpe 38 na-arụ ọrụ. Onye Minista Ahụike ga-ewepụta nkọwa ndị ọzọ gbasara ọnọdụ ahụike dị ugbu a gụnyere nnukwu ọrụ ndị ọrụ ahụike na-arụ iji nwalee ma chọpụta nje ahụ. Ndị ọrụ nchekwa anyị na-arụkwa ezigbo ọrụ iji hụ na nchekwa anyị, gụnyere nchekwa ụgbọ mmiri anyị, nke dị mkpa iji kpuchido ikpe na ịbubata. Ọ ga-amasị m iji ohere a kelee ha.
Anyị - Gọọmentị gị - ekwuola mgbe niile na achọrọ azịza ngwa ngwa nye COVID-19. Inetlọ ọrụ ga-enyocha data, echiche ọkachamara na ihe ịma aka ndị dị n'ihu anyị oge niile. Dị nnọọ ka ọrụ ndị ọkachamara n'ịgwọ ahụike na ndị na-ahụ maka iwu dị mkpa, ọ bụ mbọ nke obodo anyị. Oge eruola ka anyị gbanwee ọzọ iji lụso nje a ọgụ ma chebe agwaetiti anyị. Anyị akwagala na usoro ọzọ na atụmatụ nzaghachi anyị - ma anyị chọrọ onye ọ bụla iji kwado anyị na nke a.
Ka m bido site n'ikwu, anyị anaghị ewebata oge ịkwụsịtụ oge 24 na BVI. Ebe nke a bụ nhọrọ, ọ na - enweta nnukwu ego - akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana uche. Ya mere, anyị kwesịrị izere nke a ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ka anyị wee ghara itinye ndị ọzọ na-eche oge ihe ịma aka ihu na ihe isi ike.
Ọ dịkwa mma icheta na anyị na-eche ihe iyi egwu dị anya site na nje a, ihe iyi egwu nke na-agaghị akwụsị ma ọ bụrụ na BVI ga-abanye mkpọchi ruo izu ole na ole. Dị ka anyị ga-achọ ya, anyị enweghị ike ịhazi maka ịhapụ kpamkpam COVID-19 n'ọdịnihu dị nso ma ọ ga-abụ ihe ezi uche na-adịghị na ya. O nwere ike ịbụ ọtụtụ ọnwa, ọbụlagodi, ruo mgbe ụwa ga-apụta site na oge a. Ya mere, kama, anyị kwesịrị iji oge ọzọ iji mụta iso COVID-19 rụọ ọrụ ka ọha mmadụ na akụnụba anyị wee nwee ike ịga n'ihu ogologo oge, karịa imechi na imeghe ugboro ugboro.
Thezọ kachasị mma iji mee nke a ma kwusi nnyefe bụ ịmegharị omume anyị. Nke ahụ pụtara ịhapụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, itinye ihe nkpuchi ihu, ịgbaso usoro ịdị ọcha na igbochi ohere ị gafere maka ịbatafe mgbe ị gachara.
Ya mere, usoro ị ga-eji na-anọzi aga agha ga-amalite ọrụ echi ruo izu abụọ. Site na Wednesde 2 Septemba usoro ndị a ga - adị:
A ga-enwe mkpọchi siri ike site na 1: 01 nke ụbọchị ọ bụla ruo elekere 5 nke ụtụtụ kwa ụtụtụ. Nke a pụtara na ị ga-anọrịrị n ’ọnụ ụlọ gị ma ọ bụ mbara ezi gị n’etiti oge ndị a.
Anyi choro ka mmadu nile noro n’ulo dika o kwere mee. Obere oge ijegharị bụ maka naanị njem dị mkpa, dị ka ịzụta ihe oriri ma ọ bụ ọgwụ ma ọ bụ ịmega ahụ.
Biko ezukọla na otu, gaa na ezinụlọ ọzọ ma ọ bụ tinye aka na ọrụ ndị na-adịghị mkpa. You pụọ apụ, ị ga-eyiri ihe mkpuchi ihu nke na-ekpuchi imi na ọnụ gị nke ọma.
N’oge elekere 5:00 nke ụtụtụ na 1pm, ọnụ ọgụgụ dị nta nke azụmahịa ndị dị mkpa ga-emeghe. Ntọala ọ bụla - ụlọ ọrụ, ọfịs na ụlọ ahịa - ga-ahụrịrị na ndị ọrụ ha na ndị ahịa ha nwere ihe dịka 6ft n'ime na mpụga ntọala ahụ na onye ọ bụla na-ekpuchi ihe mkpuchi ihu. Ha ga-enyerịrị ụlọ ọrụ nhicha aka, hụ na nhicha zuru oke ma na-etinye usoro maka ndị ọrụ na ndị ahịa iji kọọ mgbaàmà.
Mgbochi ime njem nke ụgbọ mmiri na mmiri Territorial na-adị - ọ nweghị ije kwere ka ewezuga ndị enyere ikike ịme ya.
A ga-emechi ụsọ mmiri niile n’elekere iri na abụọ nke mgbede iji hụ na ndị mmadụ nwere ike ịlaghachi ụlọ n’elekere 12:1 nke ehihie n’irubere iwu obodo nyere. Nwere ike ịga naanị n'ụsọ osimiri maka mmega ahụ, ọ bụghị maka nzukọ na otu ma ọ bụ ịme oriri.
Lọ akwụkwọ mechiri emechi ma a ga-enyocha ọnọdụ a kwa izu abụọ nke Mịnịsta Mmụta nwere ike ịkọwapụta nke ọma. A ga-ahapụ ndị nkuzi ka ha banye na klas ha iji kwadebe ihe mmụta na ihe ntanetị.
Iji hụ na nrube isi zuru oke, anyị na - eme ka ndị uweojii na ndị na - ahụ maka ndị na - elekọta mmadụ na - eleta ndị mmadụ ga - eleta ụlọ ọrụ ma na - agagharị ebe ọha na eze. A ga-enwe usoro nnagide nnabata maka ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-emebi iwu. A na-agbanwe iwu ahụ iji wepụ ịdọ aka na ntị maka mmejọ mbụ. Ọ bụrụ n ’achọpụta na ị na-ada iwu a na-alọta ma ọ bụ na ị naghị eyi mkpuchi ihu ma ọ bụ n’ ime mmekọrịta mmadụ na ibe ya, enwere ike inye gị iwu n ’ebe ahụ - $ 100 maka ndị mmadụ n'otu n'otu na $ 1000 maka azụmaahịa. Azụmahịa nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na ha emeghị ihe megidere mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụ mepee na-enweghị ikike. Ndị mmadụ n’otu n’otu ga-enwe ike ịgwa ndị uwe ojii na ha emeghị ihe ha kwuru ma ọ bụ ihe ọ bụla na-enye ha nsogbu site na ịkpọ 311. Biko unu niile were ọrụ maka ịchebe anyị niile.
Dịka ị ga-atụ anya ya, anyị ga-ahazigharị akụkụ ụfọdụ nke ọrụ ọha na eze iji gboo mkpa ọhụrụ maka nyocha mmekọrịta mmadụ na ibe ya, atụmatụ ahụike ọha na eze yana nzaghachi COVID-19 niile. A ga-ekenye ndị ọrụ si n'ofe ọrụ ọha na eze dị ka achọrọ iji kwado ndị otu na-elekọta ndị na-elekọta mmadụ. Ha ga-ejide ọrụ maka ịmanye usoro na nlekota nyocha. Anyị na-achọ ịnọgide na-azụ ahịa anyị dị ka ọrụ anyị na-arụ na inye ndị ọha na eze ọrụ dị mkpa - n'agbanyeghị na ọwa dijitalụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ. Ọ ga-amasị m ịsị ekele maka ndị ọrụ ọhaneze maka mgbanwe ha na ntinye onwe ha n’oge a.
N’oge na-adịghị anya, m ga-enyefe Mịnịsta na-ahụ maka Ahụ ike bụ onye ga-abawanye nkọwa banyere ihe kpatara usoro ndị a. Onye isi ala ga-ewepụta nkọwapụta site na mkparịta ụka ndị omebe iwu.
Ọ ga-amasị m imechi site na ịrịọ arịrịọ ikpeazụ maka ọha iji biko soro usoro ndị a - ya bụ, nọrọ n'ụlọ, soro iwu mgbe ị ga-alọta, iyi mkpuchi ihu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Izu gara aga ma ọ bụ karịa bụ ihe ncheta dị egwu nke egwu anyị na-eche. Amaara m na ọtụtụ mmadụ na-agbaso usoro ahụ, ọ ga-amasị m ịsị gị onye ọ bụla n'ime gị. Omume gị emeela ezigbo mgbanwe ma nyere aka chebe anyị.
Maka ndị ahụ na azụmaahịa anaghị akwado iwu - nke a bụ oge ịkwesịrị ịgbanwe ụzọ maka obodo. Emeghị ihe ndị a bụ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma na-etinye mmadụ niile n'ihe egwu. Nanị ụzọ ị ga-esi gbochie mkpọchi aka elekere 24 bụ ka mmadụ niile rube isi.
Amaara m na ọ ga-adị ka a ga-asị na gọọmentị gị na-ajụ ọtụtụ ndị. Amaara m na ọtụtụ mmadụ atụfuola ego ha na-enweta ma na-eche nnukwu nchekasị na nrụgide ihu n'ime ọnwa ndị gara aga. Oge a siri ike nye anyị niile. Otu anyị si achịkwa usoro nke ọzọ ga-abụ ihe dị mkpa ka anyị na-aga n'ihu na-amụta ijikwa COVID-19 ma dozie ọha mmadụ na akụnụba na egwu ahụike. Anyị ga-enwe ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na anyị ebikọ ọnụ dị ka obodo iji lụ ọgụ nje a.
Biko biko, nọrọ n'ụlọ, chebe ibe gị ma nyere anyị aka imeri COVID-19.
Nkwupụta ndị PREMIER NA Mịnịsta na-ahụ maka ego
UTU EGO ANDREW A. FAHIE
COVID-19 Ọrụ Nkwado na Mwepu Ọrụ
Daybọchị ọma na ngozi Chukwu nye gị ndị nke Virgin Islands a.
N'oge a, anyị na-ahụ onwe anyị n'okporo ụzọ ebe anyị nwere iji dozie atụmatụ anyị dị ugbu a ma dozie ụzọ anyị, ọzọ.
Anyị nwere akụ na ụba azụ na egwu ma n'ihi otu ma ọ bụ mmadụ abụọ na-emebi iwu anyị laghachiri ebe a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ anọ.
Otutu enweghi ike isoro ndi pere mpe.
Agaghị eme ka ndị bi na azụmaahịa anyị nọgide na-ata ahụhụ n'ihi omume rụrụ arụ nke mmadụ ole na ole n'ihi anyaukwu na enweghị nsọpụrụ maka Virgin Islands.
Achọrọ m ịkọwa n'ụzọ doro anya na ụdị ọrụ a agaghị anabata ndị gọọmentị gị.
A ga-achọ ndị na-eme ihe niile ma ọ bụ ihe ọ bụla iwu na-akwadoghị ka a gbasie mbọ ike ma mee ka ha kpee ikpe. A ga-achụpụ ndị ọ dị mkpa ka a chụga ha. A gaghị eji BVI eme ihe dị ka ogige maka ịgbanye mmadụ na USVI yana site na USVI ruo BVI na-aga obodo ha. Gọọmentị gị agaghị ekwe ka omume nke mmadụ ole na ole tinye ọdịmma nke BVI na akụnụba anyị n'ihe egwu.
Anyị na-ekele ndị ahụ na-abịa n'ihu ruo ugbu a iji nye nduzi bara uru yana ozi metụtara ndị ahụ e kwuru n'elu.
A ga-ehibe otu ọrụ ozugbo iji kesaa ihe omume a na-akwadoghị na njedebe na njedebe dị mkpa.
Gọvanọ nke United States Virgin Islands, Maazị Albert Bryan Jr agwawo m nchegbu ndị yiri ya n'otu mpaghara a, anyị ekwenyewokwa na mgbalị anyị dị n'otu na njikọta ọnụ n'okpuru mmekọrịta ụbọchị enyi anyị iji lebara okwu a anya.
Mgbalị a, yana mgbalị ndị anyị na-eme n'obodo, ga-ezigara ndị niile bu n'obi ịnwale ma gaa n'ihu na-eme ihe ndị a na-akwadoghị na mmiri Territorial, na enwere nnagide, enweghị ndidi, m na-ekwughachi nnabata nke Gọọmenti nke Virgin Agwaetiti na mpụ.
Ana m ekwu ebe a na ndi mmadu na ulo oru anyi ekwesighi ka ha taa ahụhụ maka mmadu ole na ole na-emebi iwu. BVI agaghị abụ ebe obibi maka omume ndị a na-akwadoghị. Anyị pere mpe ma anyị enweghị ike ịga n’ihu ịhapụ ka omume a gaa n’ihu.
Dika imara na anyi nwere otutu ihe na COVID-19.
Ekwuru m mgbe niile na anyị esiteghị n'oké ọhịa ugbu a, na Mịnịsta na-ahụ maka ahụike ekwusila ike na akụkọ ya banyere ikpe COVID-19 na Territory.
Kemgbe ọnwa isii gara aga, anyị na-adọ onye ọ bụla aka na COVID-19 anaghị eso anyị egwu ma anyị enweghị ike igwu egwu na COVID-19.
Dika anyi huru onu ogugu ndi mmadu na ebili na uwa, ruo onwa isii, anyi ekwusila ike na odi nkpa ka onye obula no ebe a were iyi egwu a adighi adi anya COVID-19.
Ruo ọnwa isii, anyị na-arịọ gị ka ị heedaa ntị na ịkpachapụ anya na ịme usoro nchekwa dịka ịsa aka gị maka sekọnd 20, yi ihe mkpuchi ihu kwesịrị ekwesị mgbe ị na-apụ n'ihu ọha, debe aka gị na oghere ọrụ gị, iguzo isii dị iche iche, ma zere ịgbakọta na nnukwu ìgwè mmadụ.
Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa isii, anyị ekwuola na e nwere naanị ndị na-ekuku ume asatọ na anyị nwere ọnụ ọgụgụ karịrị mmadụ 30,000. Agwara m mgbe ahụ na anyị achọghị mgbe ọ bụla ịhụ onye ọ bụla nọ n'ọnọdụ ebe ị ga-ahọrọ onye dị ndụ ma ọ bụ onye ga-anwụ.
Mgbe ị mụtara na data sayensị gosipụtara na BVI nwere ike inwe ihe karịrị 3,700 nkwenye nke COVID-19, ọnwa isii gara aga, Gọọmentị gị site na ụbọchị otu n'ime amụma ahụ na-aga n'ihu n'ụzọ na-eme ihe ike, na-etinye usoro ahụike na mgbochi usoro iji chebe anyị niile. Maka nke a, achọrọ m ikele ndị ọrụ m ahọpụtara na ndị otu ụlọ omebe iwu niile maka ego ha kwesiri ịgafe iji mee ka nke a mee.
Anyị tinyere ego ụtụ isi nke anyị iji guzobe ụlọ nyocha COVID-19 nke aka anyị. Anyị tinyere ego na ngwa nnwale iji nye anyị ohere ịnweta akụrụngwa iji nwalee maka COVID-19. N'ime afọ ndị anyị tinyere ego na ndị anyị ka ha zụọ ma jigide ha n'ọhịa ahụike.
Ọzọkwa, anyị na-etinye ego iji mee ka Hospitallọ Ọgwụ Old Peebles weghachite maka ihe metụtara COVID-19. Na, anyị webatara ndị ọrụ ahụike 22 si Cuba, akụkụ niile nke usoro mgbochi megide COVID-19. Ndị na-enye onyinye enyekwarala aka na mgbalị anyị nke ukwuu site na iji ọgwụ na akụrụngwa dịka, mana na ọnweghị oke na ndị na-eku ume, ihe nnwale site na Ọha Ahụike Ọha England, n'etiti onyinye ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche ma anyị kelere ha nke ukwuu.
Mana lee anyị nọ, ya na ụfọdụ mbọ anyị na-ala n’iyi n’ihi mmebi iwu ole na ole.
Amaara m na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị bi na anyị chọrọ ka onye ọ bụla nwee nchebe, na amaara m na m kwenyere, na iji nyere anyị aka iwepụ COVID-19 n'ụsọ mmiri anyị.
Ma, amaara m na ndị a bụ ndị na-eyi ihe nkpuchi ha, na-edozi aka ha, na-enwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma na-erube isi na usoro iwu na ndụmọdụ niile. Ndị ahụ mejupụtara ka n'ọnụ ọgụgụ, ma Mụ na gọọmentị gị na-aja gị mma maka mbọ ndị a.
Mana enwere ụfọdụ ole na ole na-ejighị COVID-19 kpọrọ ihe ma nabatabeghị ọkwa nke ọrụ onwe onye dị mkpa iji belata nnyefe nke nje ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ọnọdụ ebe mmadụ ole na ole anaghị eji mmechi nke ókèala Territorial anyị ọ bụ ezie na ha maara na ha emechila. Iji lebara ọdịiche a anya ozugbo, anyị emeela ihe ndị ọzọ iji mee ka nchedo nke oke osimiri BVI sikwuo ike dịka akụkụ nke atụmatụ mgbochi nke COVID-19 nke 24 nke HM Customs na Immigrashọn Department na-eduzi n'okpuru isiokwu: "BVILOVE: Partnering na ichebe Oke Osimiri anyị na New Regular, ”yana ndị uwe ojii Royal Virgin Islands.
Anyị nwere ọnọdụ ọzọ ebe ụfọdụ n'ime anyị na ndị ọzọ na-apụ n'ezi ụlọ ha na-eme nnọkọ oriri na ọ socialụ ,ụ ma ọ bụ nke ezinụlọ. Anyị na ndị nne na nna anyị, ụmụnne nna anyị na ụmụ nwanne nne anyị na nna nne anyị na nwanne nne anyị na nna nwanne anyị nwanyị na-eme oriri. Anyị anaghị eyi ihe nkpuchi anyị. Anyị na-adịghị na-elekọta mmadụ anya. Anyị na-ahapụ ndị nche anyị n'ihi na ọ bụ ezinụlọ anyị. Mgbe ahụ, anyị ga-alaghachi n'ụlọ anyị ma weta onyinye Coronavirus a na-achọghị na nke a na-atụ ụjọ maka ndị anyị hụrụ n'anya ugbu a. Nke a bụ n'ezie eziokwu ụfọdụ n'ime okwu ikpe anyị mụtara banyere ya.
Nke bụ eziokwu bụ, anyị enweghị ike ịmara site n'ile mmadụ anya ma ha nwere COVID-19 ma ọ bụ na ha enweghị; ma ha buru ya ma-ọbụghị; ma ọ bụ na ha nwere ya, mana ha anaghị egosiputa mgbaàmà. Yabụ, anyị ga-amata ihe ma na-agagharị na amamihe. Anyị ga-emekọ ihe n’ụzọ dị iche. COVID-19 agbanweela ụzọ anyị si emekọrịta ruo mgbe achọtara ọgwụ mgbochi. Eziokwu siri ike bụ na anyị ga-ebi ma na-arụ ọrụ na COVID-19 na naanị otu ụzọ iji mee nke a na ogo kachasị nke ọma bụ ịgbaso usoro na ime ihe anyị na-ekwusa.
Mgbe ahụ, anyị nwere okwu ebe ụfọdụ azụmaahịa anaghị agbaso usoro mgbochi. Ha emeela ka usoro a ghara ịdị ugbu a ebe ndị mmadụ na-ejupụta ma ghara idebe nsacha ma ọ bụ saa aka ha ka ha na-abanye n'ụlọ ọrụ ahụ. Fọdụ anaghị eyi nkpuchi ma ọ bụ ọta ma ha anaghị eguzo ma nọdụ ụkwụ isii (6), ma.
Ibi na-arụ ọrụ na COVID-19 abụghị cliché, kama nke a bụ "The New Regular."
M na-aja maka ọtụtụ azụmaahịa ndị na-agbaso usoro ahụike na nchekwa.
Agbanyeghị, ọ bụ oge ịgbanwe gia. Site ugbu a gaa n'ihu azụmaahịa ọ bụla na nyocha nke na-agbasoghị usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-emezue ya ozigbo a ga-akwụsị ikikere azụmaahịa ya ruo mgbe a kwụrụ ụgwọ ahụ.
A ga-etinyekwa ihe ndị ọzọ iji gbaa ndị azụmaahịa na onye ọ bụla n'ime anyị ume ịgbaso usoro mmekọrịta ndị akwadoro.
Oge eruola ịgbanwe obi anyị banyere otu anyị si emeso COVID-19. Oge erugo ịgbanwe omume anyị na echiche anyị.
COVID-19 nwere otu atụmatụ na nke ga-agbasa site na mmadụ na mmadụ. Ya mere, anyi aghaghi inwe otu uzo - imekorita aka ichebe anyi nile site na mmadu.
Oge eruola mgbe anyị ga-aza ibe anyị ajụjụ maka ịgbaso usoro ndị a iji chebe anyị niile.
Ternyaahụ, Tuesday, 31st Ọgọstụ, ndị omebe iwu zutere ma anyị kparịta ụka banyere ụzọ dị n'otu. Anyị emeela mkpebi, nke bụ ule na-agba anyị ka anyị mụta ibi na ịrụ ọrụ site na COVID-19. Nkwuputa ndị Gọvanọ mere n'oge na-adịghị anya site n'aka ndị ọrụ gọọmentị na-egosipụta mkparịta ụka na mkpebi nke ndị ọrụ gọọmentị nyere ndụmọdụ site na ndụmọdụ nke ndị teknụzụ anyị nwere ikike na ahụmịhe sitere n'akụkụ niile nke Ọha na Ọha.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ijikwa ibi ndụ site na usoro ndị a, mgbe ahụ anyị ga-edozi usoro abụọ na atọ nke atụmatụ imeghe, yana ịgbatị akụ na ụba anyị. Have họpụtara Gọọmenti iduzi, anyị ga-edu.
Anyị niile ataala ahụhụ na mmefu na Gọọmentị gị ejirila usoro dịka iwu ị ga-enyere iji jikwaa mmegharị nke mmadụ na, site n'ime nke a, belata ohere maka nje ahụ ịgbasa.
Iji hụ na mbọ niile anyị na-agba n’ịchụ aja n’esepụghị aka n’ihi akparaghị ókè mmadụ ole na ole mere, ndị ụlọ omebe iwu tụrụ aro ka ndị National Security Council gwa Attorney General na ha ga-ewepụta usoro ị ga-eji na-eme njem (Nr. 30) itinye ebe a machibidoro ịlọta maka ụbọchị 14 malite na 2nd Septemba, 2020 rue 16th Septemba 2020 site na 1:01 pm ruo 5:00 am kwa ụbọchị. Oge ịlọta a dị mkpa iji gbochie mmegharị nke ndị mmadụ iji belata mmetụta nke Coronavirus na ọnụọgụ BVI. Nke a ga - enyere ndị ọrụ ahụ ike ohere ịchọtakwu ndị mmadụ ka ọ dị mfe ka ha na - aga n’ihu ịchọpụta ma nwale n’okwu a gosipụtara. Naanị itinye onye ọ bụla kwesịrị ịnọ n'ụlọ ha maka ụbọchị iri na anọ na-esote n'etiti elekere 14:1 pm ruo 01:5 am kwa ụbọchị.
Mgbochi ngagharị nke arịa n'ụgbọ mmiri ga-aga n'ihu. Agaghị anabata ihe ọ bụla ma a bịa n'ihe omume iwu na-akwadoghị na mmiri Oke Osimiri anyị. Ọ bụ ya mere ndị ọrụ nke HM Customs, gụnyere ndị ọzọ niile na ndị mmanye iwu na-agụnye Joint Task Force ga-anọgide na-agbasi mbọ ike na-arụ ọrụ ha dị iche iche n'ichebe BVI n'oge a COVID-19 na gafere. N'akụkụ a, anyị na-enyochazi iwu ndị dị ugbu a ka ntaramahụhụ na ntaramahụhụ siri ike dịrị maka ndị ejidere na ihe ọ bụla megidere iwu na Territorial Water.
Anyị maara na ịga n'ihu azụmaahịa dị mkpa, anyị ga-agba mbọ hụ na anyị gwụchara mbọ niile iji chebe Territory anyị ka anyị ghara iche ihu ịbanye n'ime nkeji ọ bụla. Mana, iburu n'uche na anyị enweghị ike mepee azụmaahịa niile na nke mbụ a n'ihi mkpa ọ dị igbochi ije iji nyere ndị otu aka aka ịchọta, dị ka Cabinet, anyị kpebiri na ọ bụ naanị azụmaahịa ndị ahụ dị mkpa ka enyere ka emeghe. dị ka enyere na Curfew gara aga (Nke 29) ga-aga n'ihu na-enye ọrụ na mgbakwunye na azụmaahịa ndị ahụ na-enye ọrụ nkwụnye ego yana ụlọ ọrụ ịnshọransị, ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ụgbọala.
Dị ka e kwuru na mbụ, ana m ekwusi ike na anyị ghọtara mkpa ọ dị ịga n'ihu azụmaahịa, ọ bụ ya mere dị ka Cabinet anyị kpebiri na a ga-agụpụ ndị na-eso n'okpuru Iwu Ntugharị ọhụrụ (Nr. 30), 2020:
Ndị isi nke ndị na-enye ọrụ nchekwa nchekwa dịka akọwapụtara na ngalaba nke 2 nke Iwu Nchebe Azụmaahịa Nkeonwe, 2007, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-agagharị ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị kọstọm na ndị ọrụ ọpụpụ bụ ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-eme njem ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ịnshọransị maka ebumnuche nke iwepụta na imegharị atumatu na ndị nwere nhọpụta chọrọ iji mezue akwụkwọ n'onwe ha;
Ndi oru n’oru oru ndi mmadu na ndi oru nkpuru ahihia, ndi n’aru oru, mgbe ha na-aga ma obu si na oru;
Ndị mmadụ na-arụ ọrụ na nkesa na nnyefe mmanụ akwadoro, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụrụ ọrụ dịka ndị ọrụ na-elekọta mmadụ na ndị ọrụ nzuzo, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị ọka ikpe na ndị ọka ikpe na ndị ọzọ e were n'ọrụ na thelọ ikpe, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ na-arụ ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụrụ ọrụ n’ebe a na-edebe ozu, ndị nọ n’ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụrụ ọrụ maka ebumnuche nkwado mmadụ, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụ ọrụ dị ka ndị na-akpọ oku mberede, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ si ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụrụ ọrụ dị ka ndị na-ebu ibu, ndị na-ebuga ozi na ndị na-ekesa ibu, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndi mmadu tinyere aka na ndi ozo na ndi oru ndi ozo, ndi no n'onu oru, mgbe ha na-aga ma obu si oru;
Ndị mmadụ na - arụ ọrụ dịka ndị mgbasa ozi na ndị na - ahụ maka mgbasa ozi, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na - aga ma ọ bụ si ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụ ọrụ ugbo nke ọma ma ọ bụ na-akụ azụ na mkpa ngwa ngwa maka ilekọta ụmụ anụmanụ na ndị na-enye ọrụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụ ọrụ ụgbọ njem (na-enye njem maka ọrụ dị oke mkpa ma dị egwu), ndị nọ n'ọrụ, mgbe ị na-anya ụgbọ ala ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ahịa na-enye ọrụ maka na maka ọrụ dị oke mkpa ma dị egwu, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-eme njem ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụrụ ọrụ na ngalaba ahụike na ahụ ike ihe mberede bụ ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ si ọrụ;
Ndị ọrụ gọọmentị na ndị ọrụ ego kwadoro ka gọọmentị rụọ ọrụ azụmahịa na ọrụ ego na nke ngwa ngwa na-enweghị ike ịrụ ma ọ bụ site na kọmputa, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị mmadụ na-agagharị na ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu dị ka ndị ọrụ gọọmentị kwadoro n'okpuru Immigrashọn na Paspọtụ (Oghere Ntinye Ntinye Iwu) (Ndezigharị) Iwu, 2020, (na-enweghị ntụgharị) maka ịhapụ Territory;
Ndị mmadụ na-arụrụ ọrụ maka ụlọ mberede na ndozi azụmaahịa, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ si ọrụ;
Ndị mmadụ na-arụ ọrụ na nhicha, idebe ihe ọcha, ahụhụ, ụlọ ọrụ nchịkwa na ahụhụ, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ site na ọrụ;
Ndị mmadụ were n'ọrụ site na nnyefe ego;
Ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ ọha na nkeonwe ndị na-aga ụlọ ọrụ ha maka naanị ebumnuche nke ịnweta akụrụngwa maka nkuzi na ntanetị; na
Ndị mmadụ na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ụgbọala;
Ndị mmadụ na-arụ ọrụ na mpaghara njem ahụ, nke Mịnịsta nke Immigrashọn kwadoro, ka ha rụọ ọrụ azụmahịa na ngwa ngwa nke enweghị ike ịrụ ma ọ bụ site na kọmputa, ndị nọ n'ọrụ, mgbe ha na-aga ma ọ bụ site na ọrụ.
Iji jide ụlọ ọrụ maka ịza ajụjụ maka usoro a, ndị ọrụ gọọmentị kpebiri ịkwalite ndị otu na-elekọta ndị na-elekọta ndị na-elekọta mmadụ na ndị ọrụ mmanye yana ndị isi n'okpuru osote onye isi gọọmentị, na ndị otu na-ahụ maka gburugburu ebe obibi.
Dị ka Gọọmentị, anyị nwere ike ịkwadoro gị ndị mmadụ na mkpebi anyị dabere na ndụmọdụ, data, na ọgụgụ isi sitere n'aka ndị ọrụ teknụzụ, ndụmọdụ sitere n'aka ọtụtụ ndị otu n'ime ndị omeiwu n'oge nzukọ na-ezighi ezi, yana dịka ndokwa nke Iwu Ọha Ọha, Iwu Kwesịrị Ekwesị na Iwu Ọrịa (Ọkwa).
Ekwere m na ndị m nke Virgin Islands. Anyi bu ndi kwesiri ịchịkwa akara aka anyi. Anyị nwere onwe anyị ime ihe ọ bụla anyị chọrọ dabere na ikike anyị, mana anyị anaghị enwere onwe anyị na nsonaazụ nke omume anyị. Onye ọ bụla n’ime anyị ga-arụrịrị ọrụ karịa mgbe ọ bụla, ọkachasị n’oge a COVID-19.
N'ime ihe niile anyị mechara mezuo na ihe niile anyị ga-eche ihu, ọ dị mkpa ka ị mara na gọọmentị gị na-eburu n'uche ihe ịma aka na isi ike nke ihe ndị a ga-ewetara anyị. Dịka onye ndu nke azụmahịa gọọmentị achọrọ m ikele onye ọ bụla nọ na Gọọmentị maka nkwado ha ma kelee mmadụ niile maka ekpere ha. Ekwesịrị m ikele ndị bi na Virgin Islands maka imekọ ihe ọnụ gị na ndị otu niile.
Ndi nke Virgin Islands, anyi aghaghi ikwusi ike ma gbasoo usoro ahu ike na nchedo ugbu a ka anyi wee nwee ike ihu na oganihu nke uzo abuo na ato nke imeghari anyi nke British Virgin Islands.
Nke a bụ ihe m na-ekwu mgbe m na-ekwu na anyị nọ na nke a.
Ọ bụ ya mere gọọmentị gị ji mara na oge eruola ịmekwu ihe.
Terkèala a ga-enwe ihe ịga nke ọma ma anyị na-abara mba n’aha Jizọs okwu ọjọọ ọ bụla e kwupụtara n’ihu ma ọ bụ gbachi nkịtị n’ókèala a, tụmadị gbasara akụnụba na nchekwa anyị. Anyị na-eji okwu nke udo dochie ha. Nna nna anyi ha kpere Chukwu ma rụsie ọrụ ike maka oganiru ofkèala a iji baara ọgbọ a uru. Ugbu a, anyị ga-eme otu ihe ahụ maka onwe anyị na ọgbọ dị n'ihu.
Ekwere m na ndị m nke Virgin Islands. Anyi bu ndi kwesiri ịchịkwa akara aka anyi.
Anyị nọ n'ụdị ọrụ Mwepu na Mwepu Ọrụ.
Naanị gọọmentị enweghị ike ichebe gị pụọ na COVID-19. Anyị niile nwere ọrụ dịịrị anyị ichebe onwe anyị, ezinụlọ anyị na ibe anyị.
Ọrụ nke onye ọ bụla ga-eme mgbanwe kasịnụ na COVID-19. Ọ bụ ọrụ gị ịchekwa gị nchekwa, ndị gbara gị gburugburu, yana ịgbatị BVI.
Ka anyi gbanwee gburugburu ebe anyi bi. Ka anyị nọgide na-ewere ohere ọ bụla. Ndụ ọ bụla dị oké ọnụ ahịa.
M na-arịọ onye ọ bụla nọ na BVI n'agbanyeghị ọnọdụ gị ịbịa n'ihu ozugbo ọ dị gị ka ị nwere mgbaàmà ma ọ bụ na ị nọ n'akụkụ ọ bụla ebe ị chere na ọ ga-emebi Coronavirus ma nwalee ya.
Ekelere m unu niile ndị na-agba ndị ọzọ ume ka ha tozuo oke ma gharakwa ịkpa oke maka ndị dị njikere ịbịa ka a nwaa ha, ndị nọ na iche iche, ma ọ bụ ndị nwere ike ịnwale nke ọma n'oge ụfọdụ. Kpọọ hotline na ụlọ ọgwụ na 852-7650 ma debe oge taa.
COVID-19 anaghị akpa ókè; ya mere, gini kwesiri anyi?
Gọọmentị na ndị mmadụ nke Virgin Islands yana ndị ọzọ nke ụwa na-alụ ọgụ megide onye iro na-adịghị duu, nke anyị na-enweghị ike ịhụ akpọ Coronavirus ma ọ bụ COVID-19.
Egwuregwu a abụghị ihe ị dị ka ya. Ogu a abughi maka ugwu gi. Na ọgụ a abụghị ihe gbasara mbata na ọpụpụ gị.
Ọgụ a gbasara ahụike gị. Ọ bụ gbasara nchekwa gị. Ọ bụ maka ezinụlọ gị na obodo gị. Ọ bụ maka anyị niile na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mee akụkụ anyị ma wepụ COVID-19.
Ọ bụrụ na mmadụ anaghị agbaso usoro ndị ọzọ niile etinyebere ugbu a iji nwere COVID-19, mgbe ahụ, ọ bụ naanị mgbe ahụ, a ga-amanye anyị imechi mkpọchi ụbọchị 24, yabụ ndị m bụ nke gị , nhọrọ bụ mines.
Anyị nwere ike rube isi ma ọ bụ na anyị ga-ata ahụhụ nsonazụ ya.
Ekwuola m nke a na m ga-ekwukwa ya ọzọ, anyị nwere ohere ọla edo ịnwe okwu a ugbu a na maka ọdịnihu ka anyị bi ma rụọ ọrụ na 'New Regular' with COVID-19.
Ka anyị ghara ịfụ ya. Mana kama inweta ya. ANY WILL GA-EBU N'THISLỌ A ozugbo anyị mere akụkụ nke anyị ma nọrọ na nche.
M na-emechi site n’ikwu na Chineke nọnyeere anyị! Ma ebe Ọ nọ, anyị nọ, na ebe anyị nọ, Ọ nọ, na ebe Ọ nọ ihe niile ga-adị mma.
Ka Chukwu gozie Agwaetiti ndi a Virgin.